Tourlọ Ọrụ Njem Nleta Africa: Greg Bakunzi nke Red Rock Initiative na-eme ka Rwanda Tourism dị mpako
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Tourlọ Ọrụ Njem Nleta Africa: Greg Bakunzi nke Red Rock Initiative na-eme ka Rwanda Tourism dị mpako
Na-agbasa News Travel • omenala • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Rwanda • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ebe Ugwu Red Rocks na Rwandonye nchoputa Greg Bakunzi taa ka a hoputara dika onye isi ochichi ohuru nke Afrika ndi njemd. Ọ bụ kpakpando na njem nlegharị anya nke Africa nke nwere ọhụụ maka ụlọ ọrụ, maka nkwado, yana ụzọ pụrụ iche ọ na-esi eweta azụmahịa na Rwanda na Africa dum.
Naanị na Febụwarị 2019 Maazị Bakunzi mere ka obodo ya Rwanda nwee nganga mgbe etinyere ya na njem njegharị na nchekwa nchekwa ụwa dịka onye guzobere Red Rocks Cultural Center wee kwuo onyinye ọzọ n'oge onyinye nke iri nke njem nlegharị anya na azụmahịa maka Africa (INVESTOUR). Ndi World Tourism Organisation (UNWTO), FITUR na Casa Africa haziri mmemme a.
Taa Mazi Greg Bakunzi sonyeere atumatu ohuru nke Afrika nke ndi ndu n’ime Ndị njem nlegharị anya nke Africa.
ATB President Alain St. Ange nabatara Greg taa na nhọpụta ndị Board ya. “Ọ bụ ụbọchị dị mma maka njem nleta n'Africa. Obi dị m ụtọ na Mr. Bakunzi kwetara ịbanye na ndị isi anyị ma soro Africa na-ekerịta onye ndu ya na ọhụụ ya. Nke a bụ nnukwu akụkọ maka nzukọ ọhụrụ anyị. ”
Greg rutere ndị otu ya na ndị njem njem nlegharị anya nke Africa taa sị:
Ọ bụ nnukwu nsọpụrụ na ekele na m ekele gị maka nnukwu ohere a iji bụrụ akụkụ bara uru nke ndị njem njem nleta n'Africa, enwere m ekele maka nkwanye ùgwù ị gosipụtara m.
Ekele dịrị gị ọzọ maka ntụkwasị obi i nwere n’ebe m nọ. Ana m atụ anya ịmalite ọrụ m dị ka akụkụ nke nzukọ gị. Njem m na njem na mmepe obodo metụtara ihe karịrị afọ 15 yana onye ọhụụ a họpụtara ọhụrụ na ATB enwere m ọ toụ iweta ahụmịhe na ihe ọmụma m iji kwado mmezu nke ebumnuche nke Africa
Ndị njem nleta.
Amalitere m n’afọ 2001 dị ka onye na-eme njegharị ma mechaa guzobe ụlọ ọrụ m Amahoro Tours nke toro kemgbe afọ 2008, ahụrụ m azụmaahịa m toro n’ogo nke m ji eme ọnụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, na 2011, echere m na m kwesịrị ịme ihe ọzọ na-enweghị ịhapụ njem Amahoro, nke ahụ bụ mgbe m bịara Red Rocks Rwanda dị ka ebe ọdịbendị, nke bụ nke na-arụ ọrụ ugbu a na Red Rocks Initiative for Sustainable Development, nke na-abụghị uru organizationtù na-arụ ọrụ n'Africa na-arụ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu na otu dị iche iche ịgba ume, ịkwado, ma mee mmemme ndị ọzọ na-adigide site na ịmara banyere okpomoku zuru ụwa ọnụ yana ịkwụsị ojiji nke akpa mkpụrụ rọba, si otú a na-echekwa akụ anyị sitere na ọdịbendị ọdịbendị na ebumnuche nke ịkwalite njem na nchekwa gburugburu ebe obibi dị ka ihe na-eduga ngwa ọrụ nkwado obodo iji bulie ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze na akụnụba nke ndị otu anyị.
Ana m atụ anya iji ikike m dị ka onye na-akwado maka njem nlegharị anya nke bara uru na mpaghara ndị gbara ya gburugburu na-enye ọrụ ma hụ na anyị ghọtara ihe ịma aka ndị obodo na-eche ihu na otu esi emeri ha site na iji ikike ha dị ka ntọala maka ịchọta ihe ngwọta na-adigide
Dika akuko nke World Economic Forum (WEF) biputara, ulo oru ndi njem ga-aba okpukpu abuo n’aho ise na-abia, na-eweputa puku ijeri kwa afo ma dika akuku nke atumatu nke onwe m bu itinye uzo anyi dika ebe ndi njem kachasi nma, site na ikwenye na nkwenye na kwadoro nkwado na mpaghara ndị njem na-egosi na ndị mmadụ na akụnụba ga-erite uru dị ukwuu n'ihi ụwa niile mpaghara Afrika nwere ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọkarị n'okike iji nye ndị njem.
Ọ bụ site na nke a ka m ga-eji ikpo okwu m gbaa ndị ọzọ ume ịghọta nke ọma na anyị kwesịrị ịkpụzi ma ọ bụ gbanwee echiche anyị ma kweta na obodo na njem nleta bara uru maka mmepe nke ebe anyị na-eme njem.
Dịka onye nkwado mmepe obodo na-anụ ọkụ n'obi, enwere m obi ụtọ ime ka ị mara na enyerela Red Rocks onyinye mba ụwa maka ọrụ anyị na-arụ. N'oge na-adịbeghị anya, a họpụtara Red Rocks dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ njem nleta kachasị mma na Rwanda site na Chamber of Tourism. Ndi United Nations enyego anyi aka dika ndi otu ndi otu njem nlegharị anya kacha mma na #Africa na Green Destination Travel enyela anyi asambodo maka Best Green Destination Travel Area.
N'uche nke m, ihe ndị m rụzuru nke ukwu bụ mmemme na nzukọ dị iche iche m jere gburugburu ụwa. Ihe ndị a merenụ gosiri m na e nwere ọtụtụ ihe m ga-eme karịa ihe m mere. Akụkụ kachasị mma nke ogbako ahụ bụ ebe m na-ahọrọ ihe ma soro ndị ọzọ nọ n'otu ụlọ ọrụ ahụ na atụmatụ m bụ iji Red Rocks n'ọdịnihu ma achọrọ m ka ọ bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma njem njem na mpaghara na mpaghara
Aghọtara m na ọrụ a na-abịa site na ibu ọrụ ma enwere m obi ụtọ inye m ike m niile maka nnukwu ọganiihu mmepe mmepe, yana itinye ego maka njem nleta na mpaghara ahụ.
Daalụ maka ohere a magburu onwe ya ị ga-abụ akụkụ nke Board of Tourism Board na m na-atụ anya ọrụ anyị nwere n'ihu anyị.
Ederede ndị ọzọ gbasara Red Rock Initiative na Greg Bakunzi pịa ebe a
More na African Tourism Board na otu esi abụ onye otu gaa www.africantourismboard.com
ike eme ememe center akwụkwọ nsogbu ulo mgbanwe Pịa obodo obodo njem nlegharị anya obodo ogbako nzukọ obi ike nchekwa Afrika omenala ọdịnala ọdịnala dị iche iche eme abụọ aku akụnụba okirikiri mgbalị ike n'ịhụ gburugburu ebe obibi nchekwa gburugburu ebe obibi ọkachamara ihu achọta Ihe mma forum -atụ onye nchoputa enye njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ okpomọkụ gburugburu ụwa n'ụwa nile Gaba! mma green iche iche eto eto eduzi nketa nsọpụrụ mmejuputa Na February ụzọ atụmatụ ego ọrụ iso sonyeere njem dị nnọọ ihe ọmụma ọhụrụ isi ochichi ka -achọ Lọt map so òtù Mr mba eke mkpa ọhụrụ Non arụ ọrụ ohere nzukọ òtù onye atụmatụ plastic n'elu ikpo okwu ọnọdụ uru akwalite Na-akwalite njem nlegharị anya mpako bipụtara nzube Red akụkọ Ihe onwunwe ọrụ ọrụ njem rock nkume Rwanda njem nlegharị anya nke Rwanda si akuku họrọ share show mmekọrịta ọha na eze ngwọta St Star malitere ọnọdụ atụmatụ nkwado adigide mmepe mmepe ọrụ Mpaghara IWU ngwá ọrụ tour njegharị njem njem nlegharị anya Mmepe Nleta Ndị njem njem ntinye ego nke ndi njem ngalaba njem njegharị ebe njem Industrylọ Ọrụ Njem United Nations UNWTO ojiji eji ọhụụ okpomoku nabatara ọrụ Akuko Economic World Njem nleta ụwa Òtù Njem Nleta Ụwa